Indawo yokuhlala | Tyelela uHultsfred
Njengebhedi ngamava amnandi!
ekhaya » yokuhlala
Ihotele, ihostele, i-cottage, i-B & B okanye inkampu-nokuba ufuna ukuphumla nini ebusuku kwaye kukho indawo yokuhlala unyaka wonke enokuthi ihambelane nokuthanda kwakho kunye nokuthanda kwakho. Ziphathe ngokwakho ngeempelaveki ezintle kunye nomgangatho ophakamileyo okanye ubeke intente kwenye yeenkampu zethu ezintle okanye kwindalo- nathi unokulala kakuhle nantoni na oyikhethayo!
IStenkulla yindawo yokuhlala yosapho eneembono zamachibi kwindawo entle yendalo. Malunga neekhilomitha ezili-10 entshona yeHultsfred yindawo yolondolozo lwendalo kunye neendawo zokuloba iStora Hammarsjöområdet. Indawo enomlinganiswa wasentlango
UFäggla - Istora Hammarsjöområdet
Indlu yasekhaya eneembono zamachibi kwindawo entle yendalo. Malunga neekhilomitha ezili-10 entshona yeHultsfred yindawo yolondolozo lwendalo kunye nokuloba iStora Hammarsjöområdet. Indawo enomlinganiswa wasentlango emema
Sjöåsen - Istora Hammarsjöområdet
Indlu yasekhaya enendawo yokuntywila echibini kubandakanya ijetty kunye nesikhephe. Malunga neekhilomitha ezili-10 entshona yeHultsfred yindawo yolondolozo lwendalo kunye neendawo zokuloba - iStora Hammarsjöområdet. Indawo enomlinganiswa wasentlango
Ityathanga lethole lenkomo
Indawo yokupaka egadini yeKalvkätte enamanzi, iWC kunye nendawo yokulahla inkunkuma.
Iikhabhathi zikaHagadal zobusuku bonke
Iikhabhathi zobusuku ezinendawo yabantu abane. Indlwana encinci yeekhilomitha ezili-10 zesikwere zilungele ukuhlala ubusuku bonke. Iindawo ezisemaphandleni zihlala kwindawo ebiyelwe ngasemva kwendawo. Nye
Ngumculo obeke uHultsfred emephini kwaye akukho ndawo kwenye iHultfred ngumculo onzulu ezindongeni njengaseHotell Hulingen. Thina
Ekunene embindini wechibi kunye nendawo ehamba phambili, isikhululo kukho iindawo ezine zokupaka. Kusimahla ukuma ngobunye ubusuku. Ukuba ufuna inkonzo ye-pitch, nceda ujonge kwi-Camping Hultsfred
Ihostele esembindini weHultfed. Iibhedi ezingama-25 kumagumbi aphindwe kabini, iindawo zokulala kunye namagumbi osapho. Ikhitshi elitsha langoku lokuzenzela ukutya kunye negumbi lokutyela ekwabelwana ngalo. Ishawa ekwabelwana ngayo, iWC, indlu yangasese ekhubazekileyo kunye
Qeshisa indlu encinci kwisiqithi sakho. Ilungele nina abafuna uxolo nokuzola. Phila kwisiqithi sakho nakwindlu encinci
IHammaråsen - Isiseko seHammarsjöområdet
Indlu yasekhaya enendawo yokuntywila echibini kubandakanya ijetty kunye nesikhephe. Malunga neekhilomitha ezili-10 entshona yeHultsfred yindawo yolondolozo lwendalo kunye neendawo zokuloba iStora Hammarsjöområdet. Indawo enomlinganiswa wasentlango emema
Apha uhlala zombini ngexabiso eliphantsi nangokuzola, kufutshane kubo bobabini iSmalspåret, Ihlabathi lika-Astrid Lindgren, iVirserums Konsthall kunye neminye imisebenzi. Indawo yokuhlala ene
Indawo yokuhlala yaseHesjön
EMantla eMarlilla inkampu yendalo yiHesjön. Kukho iindawo zokupaka iikharavani kunye namakhaya ahambayo, kunye nendawo yeentente eyahlukileyo. Indawo yokupaka yokukhubazeka. Ukusuka kwindawo yokupaka kukho indlela enokwenziwa ngentando ezantsi
Ihotele ehotele, ebalekayo yosapho ziimitha ezingama-50 kuphela ukusuka kwisikhululo sikaloliwe saseHultsfred eSmaland. Ukusuka ehotele unembonakalo yeLake Hulingen ekufutshane. Zonke zizodwa
Inkampu yendalo yeStora Hammarsjön
Ibekwe kwindawo entle yolondolozo lwendalo kunye neendawo zokuloba iStora Hammarsjön Ngaphandle nje kweHultsfred yindawo yolondolozo lwendalo kunye neStora Hammarsjön. KwiStora Hammarsjön, malunga ne-10 km, kukho enye
Ihostele yaseLönneberga imi ngaphandle kwe-Emil Lönneberga. Ihostele yaseLönneberga inenkonzo elungileyo, amava endalo amahle kunye nemisebenzi kuyo yonke iminyaka. Ihostele ineebhedi ezingama-55. Amagumbi
Kwinxalenye esemantla yeHultfred yifama iKloster. Emaphandleni kodwa ekuhambeni umgama ukuya kwivenkile yokutya, indawo yokubhukuda, umkhondo omxinwa kunye neendawo ezintle zokuhamba. Apha ungaqesha igumbi, indawo yokuhlala